के कोरोनाभाइरसबाट क्षतिग्रस्त भएको फोक्सो आफैं मर्मत हुन्छ त ? – News Nepali Dainik
के कोरोनाभाइरसबाट क्षतिग्रस्त भएको फोक्सो आफैं मर्मत हुन्छ त ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७ समय: १८:११:४६
कोरोनाभाइरसले बिरामीको फोक्सोलाई नोक्सानी गर्छ । भाइरस संक्रमणपछि गम्भीर बिरामी भएकाहरुको फोक्सोमा भाइरसले ठूलो क्षति गरेको पाइएको थियो । यस विषयमा डाक्टरहरुले कोरोनाका कारण गम्भीर बिरामी भएकाहरुले लामो समयसम्म क्षतिग्रस्त फोक्सोको साथमै बाँच्नुपर्ने हुन सक्ने आशंका गरेका थिए । तर, पछिल्लो एक अध्ययनले वैज्ञानिकहरुको यो डर निर्मूल गरिदिएको छ ।
नयाँ अध्ययनमा कोरोनाभाइरसबाट गम्भीर बिरामी भएर फोक्सो क्षतिग्रस्त भएको भए पनि केही समयपछि फोक्सो आफैं मर्मत हुने खुलासा भएको छ । द टेलिग्राफको रिपोर्टअनुसार करिब ३ महिनामा बिरामीको फोक्सो आफैं मर्मत भइसक्छ । यो अध्ययनमा सहभागी कोरोनाभाइरसबाट गम्भीर बिरामी भएकाहरुमध्ये आधाको फोक्सो १२ हप्तापछि पूरै मर्मत भइसकेको पाइएको थियो । यो यस किसिमको पहिलो अध्ययन हो जसमा कोरोना बिरामीको फोक्सो आफैं मर्मत भएको खुलासा गरिएको छ ।
यद्यपि कोरोना बिरामीको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुका अनुसार रिकभर भएको केही हप्ता पछिसम्म पनि बिरामीमा भाइरसको साइड इफेक्ट भने देखिन सक्छ । अध्ययनको क्रममा अष्ट्रियामा ८६ बिरामीको जाँच गरिएको थियो । यी बिरामीहरु २९ अप्रिलदेखि ९ जूनको बीचमा अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि ६ र १२ हप्तापछि यी बिरामीको जाँच गरिएको थियो ।
रिकभरीको छैटौं हप्तामा ८८ प्रतिशत बिरामीको फोक्सोमा नोक्सानी भएको प्रमाण भेटियो । तर, १२ औं हप्तामा यो संख्या घटेर ५६ प्रतिशत मात्र रह्यो । अध्ययनमा सहभागी बिरामीहरुको औसत उमेर ६१ वर्ष थियो र बिरामीहरुमध्ये ६५ प्रतिशत पुरुष थिए । सहभागी बिरामीहरुमध्ये आधाले पहिले धुम्रपान गर्थे । २० प्रतिशत बिरामीहरु कोरोनाका कारण आइसीयूमा भर्ना भएका थिए ।
Last Updated on: February 8th, 2021 at 6:11 pm